CUDURADA UGU CAAMSAN EE KHUDAARTA: KA HORTAGGA, CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA - BEERTA
Ereteriya waxaa loo tixgeliyaa meesha lagu dhalo macaan. Waxay muddo dheer ku kori jirtay Hindiya iyo Shiinaha. Thanks to globalization, miro aad u fiican ayaa ku baahsan adduunka. Khudaar waa geed oo cudur u adkaysta, laakiin xaaladaha cimilada waxaa lagu saari karaa cudurro fangas ah oo kala duwan. Sidaa darteed, sii kordhaya geed khafiif ah beertaada, waxaad u baahan tahay inaad isu diyaariso dagaalka ka dhanka ah cudurrada dhaqankan. Hoos waxaa ku qoran cudurada ugu caamsan ee khudaarta iyo hababka daaweynta.
Moniliasis ama kallana miro ah waa cudur uu sababo monilia fungus fungus. Waxay ka mid tahay cudurada ugu xun ee miro dhagax. Iyada oo qaabka muuqaalka, laba nooc oo muhiim ah oo moniliosis ah ayaa la kala saaraa: gubida monilial iyo kalluunka miraha ah. Tixgeli ilaalinta khudaarta ka soo horjeeda fangaska.
Ubax geedka ubaxa ah wuxuu dhacaa bisha Maarso, iyo beergooyska waxaa la uruuriyaa July-August. Gubashada Monilial waa qaab caadi ah guga moniliosis. Kaararka aan caadiga ahayn ee kululaynta ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin sababaha cudurkan, maaddaama heerkulka hooseeyo dhammaan jeermisyada moniliosis caadi ahaan u dhintaan. Dillaaca gubashada monilial on geedaha khudaarta waxay dhacdaa inta lagu jiro muddada ubaxka ubaxa, roobabka iyo cimilada qoyan (qulqulka iyo dhoobada).
Calaamadaha. Astaamaha gubida monilial waa kallana ubax. Midabka caadiga ah ee tufaaxu isbeddelayo brown. Xaaladdan oo kale, qoryuhu wuxuu noqdaa mid madow, kadibna si degdeg ah ayuu u dhintaa. Tani waxay sabab u tahay in gogol-xakameynta cudurku ku jiro ubaxyada furan iyada oo loo marayo pistil ee ubaxa. Natiijo ahaan, qaybta ubaxa oo dhan oo dhirta ka baxaysa way baxdaa. Iyada oo horumarinta xooggan ee cudurka, fangasku wuxuu kufayaa caleemaha yar yar. Tani waxay horseedaa burburkii dhowr geed oo geed ah; caleemaha waxay bilaabaan in ay laalaadaan, ka dibna waxay u leexiyaan bunni iyo dhib badan. Caadi ahaan caleemaha kuma dhacaan dhulka, waxay ku sii jirayaan laanta geedka illaa guga soo socda. Dildilaaca ayaa ka muuqda laamiyo qaro weyn leh, ka dibna wuxuu ku soo boodaa nabarrada cirridka. Geedkuna wuxuu u egyahay sida dabka lagu gubay. Muddo ka dib, khudaartu waxay u dhiman kartaa gebi ahaanba.
La dagaallanka cudurka. Calaamadaha ugu horreeya ee gubashada monilial, waxaa muhiim ah in laga saaro dhammaan qaybaha bukaanka ee dhirta. Tani waxay joojin kartaa faafitaanka cudurkan cayayaanka. Ka dib 2 - 3 usbuuc ka dib ubax, ku celi habka. Calaamadaha cudurka ayaa suuragal ah in qaab ah miro la miraha. Waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo lana baabi'iyo midhaha qalalan. Ka soo horjeeda gubasho monilial ah, buufin leh 3% Bordeaux dareeraha ama 0.9% oxychloride copper ayaa waxtar leh. Ha dayacin xoqan, samee dhammaadka dayrta - kahor bilawga xilliga hawada qabow.
Fruit Gray Rot
Kalluunka Miraha waa noocyo kala duwan oo xagaaga moniliosis, kaas oo ku kaco cimilada qoyan toddobaadyadii la soo dhaafay ka hor goosashada khudaarta. Tani waa cudurada ugu caansan ee khudaarta, midhaha miro ayaa macnaheedu yahay lafdhabarka, sameynta kalluun brown iyo caaryada cad.
Calaamadaha jirrada. Marka hore, dhibco yar oo khafiif ah ayaa ka muuqda khudaarta, ka dibna sii faafaya oo jilicsan, ugu danbeynna wuxuu daboolayaa dhammaan miraha. Ka weyn cawska guduudka ayaa la sameeyaa. Waqti ka dib, abrikot si buuxda u engegay iyo kallana. Siyaabaha halista iyo ka hortagga. Dagaalka ka soo horjeeda khalkhalka khudaarta wuxuu bilaabmaa guga sanadka soo socda. Xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, dareeraha Bordeaux waa la buufinayaa, cusbooneysiinaya qaliinkan laba illaa seddex jeer mudo 15 maalmood ah. Si looga fogaado horumarinta kalluunka casaan, bilowga hore ee ubax waxay isticmaalaan mukhaadaraadka moniliosis: "Nitrafen", "Confidor", "Horus". Guga, ka dib markii midhaha u muuqdaan on geed, ka saar qaar ka mid ah laamaha si looga fogaado fruiting xad-dhaaf ah. Sida qiyaas ka hortag ah, dayrta, ururso oo gubi caleemaha iyo miraha geedka ama ku tuur meel meel bannaan ah. Si gaar ah u fiiri xakamaynta cayayaanka, maadaama ay cayayaanka badanaa u adeegaan sida sidda kalluunka. Si looga hortago isticmaalka sunta cayayaanka.
Waa muhiim! Haddii miraha khafiifka ah ee khudaarta aan laga saarin naftooda, waxay ku sii jiri doonaan geedka jiilaalka oo dhan. Fungus khatar ah, sida aad ogtahay, jiilaalka karaa on miraha geedka. Cudurka ayaa muujinaya oo saameyn doona beergooyska sanadka soo socda. Sidaa darteed, hubi inaad ka saarto dhammaan miraha bukaanka iyo caleemaha!
Spot Leaf Spot (Gnomoniosis)
Gnomoniosis saameyn ma aha oo kaliya caleemaha, laakiin sidoo kale midhaha geedka. Faakihaadka ayaa isku boodi kara iyada oo aan laheyn waqti ay ku rusheeyaan. Haddii khudaarta cagaaran ay weli u bislaadaan, ka dibna fangasku wuxuu u noqon karaa miro fool xun oo qaab aan caadi ahayn.
Calaamadaha. Astaamaha ugu weyn ee gnomoniosis waa muuqaalka kore ee dhibco yaryar caleemaha. Waqti ka dib, dhibcuhu waxay kordhiyaan, noqdaan bunni waxayna daboolaan dhammaan dusha xaashida. Haddii aad u oggolaato horumarinta cudurka, caleemaha ayaa qalaji doona oo dhici doona bilawga ah.
Ka hortagga iyo daaweynta. Haddii aad ku aragtid waxyeelo geedka, waa wax aan la aqbali karin in laga tago khudaarta ku jirta gobolkaas. Meelaha ay dhibaatadu saameysey waa in la nadiifiyaa. Intaas waxaa sii dheer, daawee carrada hoostiisa oo leh 1% bakteeriyada naxaasta ah ama Nitrafen. Ha ilaawin inaad ku buufiso ka hor bilowga Maarso. Wax ku ool ah kiiskan waa ku buufin dareeraha Bordeaux. Sidoo kale, si looga hortago baahida loo qabo in laga saaro caleemo haray ka dib dayrta.
Muuqaalka Holey (klyasterosporioz)
Klesterosporiosis waa cudur fungal ah oo ku nool kelyaha buka iyo caleemaha ku dhowaad dhammaan geedaha dhagaxyada. Daaweynta funguskaan ee stem khafiif ah ayaa ugu waxtar badan bilawga cudurka.
Calaamadaha. On caleemaha geedka khafiif ah muuqan goobo yar yar oo midab khafiif ah. Dhibcuhu waxay u egyihiin sida haddii lagu riixo caleen. Meelaha ay dhibaatadu saameysey waxay ku qallajisaa dhicid iyo dayrta, samaynta daloolka caleemaha. Taasina waa sababta cudurkan uu helay magaca "xakameyn daro." Dheeraad ah, haddii fangasku si xun u saameeyo, caleemuhu waxay u egtahay in ay qadarinayaan. Intaas waxaa sii dheer, koritaanka waxaa lagu sameeyaa stem khafiif ah, kaas oo ka soo baxaya casiirka (ciridka). Sidee baad u bogsan kartaa geed khafiif ah? Dhibaatada dhirbaaxada ee khudaarta ayaa dhici karta maaha oo kaliya sababtoo ah infakshanka fangas, laakiin sidoo kale sida falgalka dhirta ee infakshanka bakteeriyada, gubashada, iyo sidoo kale kiimikooyinka. Sidaa darteed, haddii aad aragto calaamadaha astaamaha, waa in aad marka hore ka heshaa halka laga helo cudurka.
Haddii uu cudurka qabo asal ahaan faafa, waa inaad isku daydaa inaad baabi'iso sababta sababa daciifinta geedka. Haddii meesha lafdhabar u yahay ay ka soo jeedaan fungal, qaado tallaabooyinka ilaalinta haboon. Fangasku wuxuu awood u leeyahay inuu hibernate caleemo dhacday, sidaa darteed si taxadar leh u soo ururiyaan iyo burburiyaan caleemo dhacday. Ka dibna qodo aagga asliga ah. Nidaam lagu kalsoonaan karo oo lagula tacaalo mansa khudradda waa daaweynta daawooyinka bakteeriyada leh (hal boqolkiiba oo ah bakteer sulfate ama dareeraha bordeaux). Moobeyl ayaa la sameeyaa guga hore, sida ku cad tilmaamaha loogu talagalay daroogada loo doortay. Ha ilaawin inaad daboolatid nabarrada cirridka ee qoryaha leh garoonka beerta.
Ka hortagga. Sii shuruudaha koritaanka wanaagsan ee warshadda: biyaha geedka wakhtiga, ku dhaq taajkii, quudinta bacrimiya, ka saar laanta la saameeyey waqti.
Nooc caleen ah (wakiil keena - isbedelka musqusha ee taffrin) waa cudurka ugu daran ee miro dhagax. Dhirta ay waxyeeleeyeen waxay luminayaan waxtarkooda caadiga ah. Cudurka marmarka qaarkood wuxuu keenaa in si buuxda lumiyo miraha. Waxay u egtahay muuqaalka muuqaalka barafka iyo guduudyada caleemaha. Caleemaha waxay noqdaan kuwo qalloocan, "xariif" - markaa magaca cudurka. Calaamadaha:
Guga, caleemaha dhalinta yar yar (blister).
Kabuubyadu waxay noqonayaan hurdi, oranji iyo casaan ka hor intaan la madoobeynin iyo maqnaanshaha.
Miraha iyo caleemaha ayaa ku dhinta jeexjeexyada.
Caleemaha waa la qabsadaa waxayna lumiyaan muuqaalkooda caadiga ah.
Ka hortagga. Sida fangaska ugu badan, laadku wuxuu ku dhacaa cimilada diiran marka hawadu weli tahay qoyaan. Ka hor inta aaney bilaabmin xilligan, dhammaadka jiilaalka ama guga hore, waa inaad horey u dhaqantaa.
Waa muhiim! Marka laga hadlayo cudur sida cawska caleenta, waxba kama beddeleyso daaweynta daaweynta. Ka hortagga waa habka kaliya ee wax ku oolka ah ee looga hortagi karo funguskaan! Marka cayayaanka ayaa ka muuqday caleemaha geedka khafiifka ah, waxay ahayd arrin aad u daahday in wax la sameeyo.
Talooyinka Ka Hortagga Cawska:
Fangasku wuxuu inta badan hibernates galay humus, sidaas darteed dayrta si taxadar leh u saar ka caleemo dhacday dhacday beertaada.
Ka dibna samee daaweynta koowaad ee Bordeaux. Talaabadani waxay lagama maarmaan u tahay in laga hortago dabaysha guga.
Shaqooyinka raridda ayaa dib loo bilaabi doonaa bisha Febraayo.
Marxaladda saddexaad ee buufinta dareeraha Bordeaux waxaa lagu sameeyaa burooyinkeeda kowaad ee geedaha illaa Maajo (15kii maalmoodba mar).
Ka waran haddii cudurku hore u muujiyay? Xaaladdan, waxaan si fudud uga hortagi karnaa faafidda cirridka caleen. Fangaska waa in laga saaraa sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo doorbidayo dhammaadka Janaayo. Waxaad isticmaali kartaa bakteeriyada leh bakteeriyada leh bakteeriyada. Haddii uu cudurku soo hagaago, kaliya ka saarista geedkii caleemaha saameeya oo dhan, laamaha iyo miro ayaa caawiya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagugula talinayaa in laga fogaado-gooyo - geedka si weyn u wiiqi karaa. Si aad u ilaaliso xididada laga bilaabo dhaxan xilliga qaboobaha iyo kulaylka xagaaga, mulch salka geed. Sidoo kale ha ilaawin bacriminta guga ee geed leh Bacriminta dabiiciga ah. Ama ku daawee qoryaha isku isku dar ah Bordeaux (sida waafaqsan tilmaamaha).
Kabuub waa cudur kale oo fangas ah oo geedo khudrad ah. Funguskan waxay sameysantaa enzymes kuwaas oo weeraraya derbiyada gacanta ee midhaha. Cuntada ka baxsan caleemaha caleemaha dhacday. Intaa waxaa dheer, horumarinta cudurku wuxuu keenaa in ka badan qoyaan (roobab badan). Mudada dheer ee caleemaha geedka qoyan yahay iyo heerkulka sare ee hawada, ayaa dhakhso u faafaa. Laga bilaabo bisha Maajo, dhaawaca ugu horreeya ee caleemaha iyo miraha horeba waa la arki karaa. Calaamadaha. Wax yar ka dib ubax, dhibco mugdi ah oo cagaar ah ayaa lagu sameeyay caleemaha, ka dibna waxay noqdaan cawl-buni. Tani waa infekshan aasaasi ah. Kabuubka abaydhka si dhakhso ah ayuu u korri karaa. Xaaladaha ugu xun, fangasku wuxuu ku faafaa dhamaan caleenta caleen. Caleemuhu si qumman ayay u qallajiyaan oo u dhacaan Laga bilaabo waqti ka waqti caleemaha sidoo kale ku dhaco oo u dhintaan. Haddii cudurka infekshanku soo daahay, miraha geedka waxay bilaabaan inay xanuunsadaan. Miro ayaa lagu daboolaa lebbiska adag ama cawl adag. Jirka jirka dillaacsan. Kabuubku wuxuu baabi'iyaa hilibka midhaha. Khudaarta ayaa luminaya dhadhanka, waxay noqdaan kuwo cakiran oo lumiya qiimaha qurxinta.
Ka hortagga iyo daaweynta. Way adkaan doontaa in la isticmaalo sunta cayayaanka ee beerta, maaddaama ay tahay in la soo saaro cimilada roobka (laga bilaabo Abriil ilaa Juun) qiyaastii 4 maalmood oo kasta. Intaa waxa dheer, dhirta badi khudaarta waa kuwo aad u weyn si ay u awoodaan in ay hirgeliyaan dhammaan caleemaha iyo caleemaha leh wakiilka antifungal. Sidaa darteed, ka hortagga ugu fiican wuxuu noqon doonaa doorashada saxda ah ee noocyada khudaarta. Ka fogow noocyada xasaasiga ah ee xasaasiga ah. Dooro more la isku halleyn karo, adkaysi u noocyada cudurada fangas. Noocyada khudaarta soo socda ayaa muujiyay iska caabin adag: Denisyuk Special, Monastyrsky, Gold Rich.
Verticillary dildilaaca geedo midho leh ayaa laga helaa dhammaan dalalka adduunka, laakiin marar badan meelaha meelaha cimilada leh. Dhaqanka shimbiraha ayaa ugu nugul cudurkaas.
Calaamadaha. Cudurku badanaa waa la arkaa xagaaga hore; waxaa loo aqoonsadaa sida luminta caleemo by by addimada qaba, ka bilaabaan saldhig laanta kasta. Ka hor inta aanu dhicin, caleemuhu waxay marka hore noqon karaan huruud iyo caajis. Dhamaadka xagaaga, kaliya farabadan caleemo ayaa ku sii jiri kara laan culus oo saameeya. Xirmooyinkaasi waxay ku sii jirayaan geedka illaa dhowr asbuuc oo dheeraad ah. Calaamaduhu waxay muujin karaan geedka oo dhan, laakiin calaamadaha sidoo kale waxay ku koobnaan karaan hal laan uun.
Si si sax ah loo baadho verticillus ee khudaarta, gooyaa laamaha iyo furo alwaax gudaha. On qoryaha xanuun leh, dhibco madow ama mugdi ah ee qaab aan joogto ahayn waa muuqaalka qaybta kala duwan. Mararka qaarkood dhibcuhu waxay isku galaan giraan. Xaaladaha khafiifka ah ee infekshanka, dhirta qoryaha ayaa ku dhici kara maqnaanshaha calaamadaha caleemaha. Dhirta ay saameeyeen ayaa si tartiib ah u dhintaan, laakiin khatarta deegaanka ee cudurkan ayaa ku jira xaqiiqda ah in dhirta ay wali gaaban yihiin oo aan dhamaystirnayn muddo dheer. Xakamaynta iyo daaweynta. Fungus ayaa ku sii jiri doonta ciidda sanado badan oo ah astaamahan xididka ah. Ilaa iyo halka laga soo xigtey cudurka waxaa ku jira ciid, duufaantu way adag tahay in la xakameeyo. Intaa waxaa dheer, fungus wuxuu ku faafaa gudaha qoryaha geed dhan. Ma jiro hab daaweyn ah kiiskan ma aha mid lagu kalsoonaan karo.
Si loo ilaaliyo geedka khafiifka ah ee loo yaqaan 'verticillary viltic', ama ugu yaraan hoos u dhig tirada tirada fangaska by hababka ka hortagga soo socda:
Noocyada cusub ee miro dhagaxa dhagax waa in lagu rakibaa dhulkii sanooyinkii ugu dambeeyay aaney korin. Iska ilaali geedaha meelaha ay dalagyada sida bataatada, yaanyada, ama strawberries horay u joogeen.
Si looga saaro fangaska haray ka soo carrada, fumigate ama dhul kale oo beerta ka hor beerashada geedaha (tusaale ahaan, dhalaali carrada).
Muhiimadda weyn waa tayada wax lagu beerto. Isticmaal kaliya oo la ansixiyey oo aan cudur ku jirin beeritaanka.
Iska ilaali waxyeelada xididdada dhirta dhalinyarada iyo xadiga xad dhaafka ah ee bacriminta.
Marmar ka saar geedaha dhan ee ay saameeyeen, laamaha aan dhamaadka lahayn.
Qalitaanka Cytosporosis (Cytosporosis)
Sababta qalajinta geedaha yar yar ee geedku wuxuu noqon karaa cudur sida cytosporosis. Waa dhirta khudaarta ugu badan ee u nugul cudurkan. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa qalajinta lays qaadsiiyo, taas oo ah, dhirta fangasku ku dhex marayso waxyeelo kala duwan oo farsamo, jarista iyo jarista.
Calaamadaha. Cudurku wuxuu ka soo baxaa dusha sare ee caleemaha qaabka lafaha cawliga ah, foomka dhibcaha ee jilifka, caleemaha u engegay. Wareegga fungus wuxuu ku fidiyaa laamood dhalinyaro, faafinaysa geedka iyo saamaynta caleemaha jir iyo jir geed. Waqti ka dib, lafaha qalfoofka ayaa dhimanaya. Faafidda noocan oo kale ah waxay keentaa dhimashada geedka oo dhan. Qallajintu waxay u dhici kartaa sida iftiiminta, jilibku si lama filaan ah ayuu u qaadanayaa midab casaan ah. Sidaa darteed, waxay u muuqataa in guul darradu ay si lama filaan ah u dhacdo iyo sabab la'aan. Laakiin cytosporosis ma dhicin si fudud. Sidaa awgeed geedka ayaa horey u wiiqantay wax.
Hababka wax looga qabto cudurka. Waxa ugu muhiimsan waa in laga hortago khilaafaadka ka imaanaya qoryaha. Si loo dhammeeyo, daboolo waxyeellada geedka ee leh beerta beerta, iyo sibidhka ballaaran ee cement. Dhamaan waxyeelada qorraxda, abaarta iyo barafka waa in lagu nadiifiyaa sulfate copper, oo ay ku xigto adiguna. Geedka kaymaha waa sahlan tahay in lagu hayo marxaladaha hore ee cudurka. Hase yeeshee, hibada, daweyn kasta oo kiisaska ah ee cudurka cytosporosis ayaa ah mid aan waxtar lahayn.
Waxaad u keydin kartaa geedka sidan: sida ugu dhakhsaha badan, ka saari dhammaan dhammaan laamood ee la gooyay (engeg), qabashada 10 cm qaybta caafimaadka leh ee biqil. Waa in la qaadaa tallaabooyin dheeraad ah oo ilaalin ah. U baahan tahay in la go'aamiyo waxa loo baahan yahay in la hagaajiyo khudaarta guga. Geedka ka dib, geedka waa in lagu daboolaa beerta beerta, qabashada dhexdhexaad ah oo ka badan 2 cm.Dhammaan xilliga dayrta, waa inaad hubisaa inaad ku darto dharka iyo dharka fosfatiga. Ash waxaa loo isticmaali karaa bacriminta la heli karo. Ku dhaji dhaymo dufan leh waraabinta joogtada ah.
Ma taqaanaa? Bacriminta Foliar ayaa aad u faa'iido leh geedka khudaarta (waxaa jira Bacriminta aad u fiican ee iibinta). Habkani wuxuu u ogolyahay nafaqooyinka iyo walxaha raadraaca si dhakhso ah u galaan caleemaha geedka iyo ilaalinta dhirta. Ha dayicin fursadaha noocaas ah!
Qalitaanka Fusarium (Fusarium)
Qalitaanka Fusarium wuxuu saameeyaa khudaar kasta da 'kasta, laakiin marar badan marxaladda ubaxa. Faafidda iyo horumarinta cudurku wuxuu keenaa cimilada kulul.
Calaamadaha. Marka ugu horeysa, caleemo ayaa u muuqda midab-bunni, caajis, dhibco yar. Later, dhibco u muuqdaan on miraha, jidhka ka yar meeshii ay noqoto qalalan, calsan, diirka hoos u. Infekshanka badanaaba wuxuu ku dhacaa infekshan ku dhaca carrada.
Daaweyn iyo ka hortag. Fusarium wuxuu saameynayaa geedaha badanaa daciif ah. Geedaha leh waxyeello farsamo (dildilaacyo, jarid) waxay u nugul yihiin cudurka. Sidaa daraadeed, dagaalka ka dhanka ah qalajinta, waa muhiim inaad timaado geedka, quudinta ciidda, biyaha, daaweynaya boogaha, ka hortagaan buufinta iyo daweynta khudaarta (guga iyo dayrta). Xilliga dayrta, iska qaado oo gubi haraaga dhirta - meelaha infekshanka suurtogalka ah. Si taxaddar leh u dooro ciidda beeritaanka geedaha.
Ma taqaanaa? Mararka qaarkood waxay dhacdaa in geedka khafiifku uu jirrado oo uu dhinto xitaa ka hortag ah oo taxadar leh iyo daaweynta ugu fiican. Bakhaarrada weli ma heli karaan sharraxaadkan. Абрикосовые деревья очень теплолюбивые, поэтому основной причиной считается неподходящая для абрикоса климатическая зона.
Sidaa darteed, sida geedo badan oo khudrad ah, khudaar cufan ayaa laga qaadaa cudurrada marmarka qaarkood burburin kara miraha miraha. Geedka khudradda waa in si joogta ah loo hubiyaa caabuq, xitaa gudaha gudaha. Xaaladaha badankood, cudurrada khudaarta ayaa ah sababo daryeel xumo iyo beeritaan aan habooneyn. Daaweynta degdega ah iyo ka-hortagga ayaa ka hortageysa cudurada iyo fungi. Haddii wax walba si sax ah loogu sameeyo daryeelka geedaha, milkiilayaasha beerta waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​miro saafi ah oo miro leh xagaaga oo dhan.